“Taladu waxey ka go’daa dadka inala jooga ee kama go’do kuwa haatan madaxda u ah Somaliland……”Ra’iisal Wasaaraha Maamulka Somaliya |
“Taladu waxey ka go’daa dadka inala jooga ee kama go’do kuwa haatan madaxda u ah Somaliland……”Ra’iisal Wasaaraha Maamulka Somaliya
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya, Cumar C/rashiid ayaa kulan qado sharefeed shaley oo bishu aheyd 03-01-2017 ugu sameeyey xarunta Madaxtooyada Villa Somalia Xildhibaano ku sheega aaney cidi dirsan ee isu heysta in ay Somaliland wakiil ka yihiin. Kulankaas oo ka dhacey guriga ay u bixiyeen “Midnimo” ayuu Ra’iisal Wasaare Cumar Xildhibaano ku sheega ugu sameeyey balan qaadan doqoniimo siyaasadeed ku dheehantahey. Waxaanu yidhi in haddii uu xilka ku guuleysto uu muhiimada kowaad siin doono Midnimada Soomaaliya iyo Soomaliland.
Murashax Cumar C/rashiid ayaa tilmaamey midnimo dhameystiran iyo is cafis guud oo bulshada Soomaaliyeed dhex mara ay wali wax badan ka dhiman yihiin. Waxaanu ka codsadey Xildhibaano ku sheeg ka soo jeeda Somaliland in codkooda ay siyaan si uu hadafkiisa u gaadho. Cumar C/rashir oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi “ Waxaan qabaan in shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha ah ay dhibaatooyin badan kala gaadheen, haddii aynu Siyaasada saxno wax walba waynu ku guuleysan karnaa. Waxaan xooga saari doona haddii Alla ii qadaro Xilka aan raadinaayo midnimada Ummadda. Arrinta Somaliland waa in sii buuxda loo galaa tiiyo lala tashado dadka ay taladu ka go’do, kuwaas oo ah intiina maanta I hor fidhada. Wadahadaladii Hore waxa mar walba fashilka ku keeney waxa kow ka ahaa in aan marnaba lala tashan dadka sida dhabta taladu ugu go’do ee aaminsan Midnimada ummada Soomaaliyeed.
Cumar C/rashiid ayaa, sida hadalkiisa laga dheehan karo aaminsan in Xildhibaano ku sheega la jooga ee isu heysta in ay Somaliand wakiil ka yihiin ay keeni karaan Midnimada afka baarkiisa ah ee Madaxda Soomaaliya ku wareertay. Waxaanu hilmaam sanyahey in Bushada Somaliand waa hore aayaheeda ka tashatey , taladeedana u dhiibatey madax ay iyadu si xalaal ah u dooratey.